प्रहरीमा एसपीको बढुवा तयारी, को को छन् प्रतिस्पर्धामा ? -
January 4, 2021 January 4, 2021 अखवार अनलाइनLeaveaComment on प्रहरीमा एसपीको बढुवा तयारी, को को छन् प्रतिस्पर्धामा ?
काठमाडौं २० पुस । नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी) लाई वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा गर्ने तयारी थालिएको छ । पुस १३ मा गृह मन्त्रालयले ९ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । एक सातासम्म कुनै उजुरी नपरेपछि डिआईजी बढुवा पूर्ण भएको छ ।
डिआईजीको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेपछि तत्काल योग्यता पुगेका प्रहरी उपरीक्षकहरुलाई एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरिने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अहिले एसएसपीको ९ पद रिक्त छ । तर, पुस २९ मा दुईजना एसएसपी अवकाशमा जाँदै छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार डा। गणेश रेग्मी र राजकुमार बैदवार ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनीहरु ०४७ माघमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
उमशंकर पञ्जियार माओवादी युद्धकालमा जागिर छाडेर घरमा बसेका थिए । पछि, अदालतको आदेशले उनी प्रहरी सेवामा फर्किएका हुन् । बढुवा प्रतिस्पर्धी योगबहादुर पाल र टिका बहादुर केसी गुप्तचर (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) बाट नेपाल प्रहरीमा आएका हुन् ।
०४७ माघमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बाट सेवा प्रवेश गरेका दुईजना एसपी पनि अवकासमा जाँदै छन् । प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र विष्ट र रमेश थापा पुस २९ मा अवकाशमा जान लागेका हुन् ।
बरिष्ठ शौन्दर्यविद सुष्मा महरा ‘स्पर्श म्युजिक भिडियो अवार्ड– २०२०’ द्धारा सम्मानित
राजधानी ग्याँसको अभाव, सिलिण्डर जोहो गर्न थालेपछि पसलमा पाइन छाडयो ग्यास
२४ घण्टामा देशभर थप ३७ सय ९० जनामा कोरोना पुष्टि, देशभर ४० हजार ७७८ जना संक्रमित
October 19, 2020 अखवार अनलाइन
March 15, 2019 अखवार अनलाइन
भक्तपुरकी चार बर्षीया बालिकामा कोरोना पुष्टि
June 28, 2020 अखवार अनलाइन
भक्तपुरको लोकन्थलीमा सडक भासियो, ४ वटा घर खतरामा
नेपाली भूमी फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा विशेष दुत पठाउने